China abalawuli mveliso kunye nabenzi | SJJ
Ngaba unengxaki yokufumana isipho esisebenzayo kubathengi bakho? Abalawuli ababodwa zizipho ezigqibeleleyo abanokuthi bazisebenzise kubomi bemihla ngemihla.
Ngaba unengxaki yokufumana isipho esisebenzayo kubathengi bakho? Abalawuli abazimeleyo Zizipho ezigqibeleleyo abanokuthi bazisebenzise kubomi bemihla ngemihla.
Izinto ezintle ezibengezelayo zibonelela ngezinto zokubhala zesikolo, izinto zokubhala zeofisi kubandakanya abalawuli. Umlawuli uhlala eqinile, enokuthenjwa. Uyilo olushicilelwe ngokuchanekileyo kwiisentimitha zombini nakwiisentimitha, kuluncedo kuwe ukuba ukhethe isikali sokusebenzisa kwaye uya kuma kwiimfuno zosetyenziso lwemihla ngemihla.
Sinikezela ngomthi, iplastiki kunye abalawuli abicahngemibala eyahlukeneyo, unokukhetha oyena mlawuli ufanelekileyo ukuphucula uphawu lwakho! Ukuba ufuna enye into eyedwa, ekhethekileyo okanye ujonge ukuthenga iirula ezizodwa, zive ukhululekile ukusithumela umyalezo kunye nezicelo zakho.
Material: PVC, abicah, PP, ABS, ABS + AS, PET, isinyithi, iinkuni njl
Ishicilelwe ngee-intshi zombini kunye neesentimitha, amanqaku acacileyo kwimilinganiselo yakho efanelekileyo
Isixhobo esihle sokulinganisa umphezulu ogudileyo, sikunike amava asebenzayo
Izicelo ezibanzi, ezilungele ikhaya, ukusetyenziswa kweofisi, ngakumbi abafundi besikolo nootitshala
Ixabiso loKhuphiswano, Iisampulu zasimahla, Uyilo loMsebenzi wasimahla
Okulandelayo: Incwadana yamanqaku kunye neNqaku eliNcamathelayo
isiko eshicilelweyo abalawuli